China ND300 ndị na-emepụta ihe na ndị na-emepụta ya | Jianma
Ọgbọ ọhụụ nke nuklia acid na-achọpụta ngwa ngwa
Colorimetric isothermal nucleic acid nchọpụta teknụzụ bụ teknụzụ nchọpụta ngwa ngwa ngwa ngwa nke onwe ya site na nederbio maka mkpa nke nchọpụta ngwa ngwa na saịtị ahụ, nke nwere ike inye nsonaazụ nchọpụta ziri ezi, ngwa ngwa, kensinammuo na Qualitative nucleic acid.
Teknụzụ a jikọtara amplification acid na nchọpụta colorimetric n'ime otu nzọụkwụ, mezue njupụta acid na nchọpụta na-arụ ọrụ n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla, ma nwee ike ikpe ikpe nchoputa site na anya gba ọtọ.
Ọ bụ teknụzụ kachasị dị mfe na nke amamịghe maka nchọpụta ngwa ngwa nke nucleic acid.
Nd300 na-achọpụta ihe na-eme ka mmiri na-acha odo odo na-adabere na mmepe onwe ya na teknụzụ nchọpụta nke mmiri na-acha odo odo na-acha odo odo. Emere ya nke ọma maka nchọpụta nucleic acid ngwa ngwa.
Ọ bụ ihe ziri ezi, ngwa ngwa, obere na mfe iji. Ọ nwere ike ịmechaa nchọpụta ngwa ngwa nke nucleic acid ngwa ngwa ma nyere gị aka ịchọpụta ezigbo oge nke nucleic acid.
Izi ezi nke njikwa okpomọkụ bụ 0.1 ℃, njikwa ogo dị elu na ihe anya. Ọnụ ọgụgụ dabara adaba nke colorimetry na usoro fluorescence bụ 100%;
Enwere ike ịghọta nkọwa ọkụ a na-ahụ anya nke ọma, na nsonaazụ ya nwere ike gosipụta ma bipụta ya site na ngwa ahụ;
Mfe, obere nha, ibu dị mfe, mmetụ agba agba onye ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, kwesịrị ekwesị maka nyocha ngwa ngwa na ubi;
E bipụtara nsonaazụ ya ozugbo.
Ngwa: ule nchekwa nri (njirimara nke microorganisms pathogenic, transgenic, ihe ndị e nwetara na anụ)
Ọrịa anụmanụ (ịkọ anụ, ngwaahịa mmiri, nchọpụta ọrịa anụ ụlọ)
Ọgwụ ahụike, nyocha sayensị, wdg
>> Ngwaahịa ngwaahịa
Nhazi arụmọrụ nlereanya ND300
Akụkụ 320 * 280 * 125mm
ibu ibu 2.5 N'arọ
Ịnye ọkụ 100 ～ 240V, 50 ~ 60Hz
mkpọtụ mkpọtụ 20 Decibel
nkwurịta okwu interface USB
Ọnọdụ okpomọkụ dị na-arụ ọrụ 4 ~ 35 Celsius
Ikwu iru mmiri nke na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi ≤85%
Ationgbọ njem na nchekwa nchekwa 20 ~ 55 ℃
Ihe mkpuchi na-ekpo ọkụ ọ dịghị ihe
Njikọ kwa Sample ikike Oghere 32 * 0.2ml
Olu olu 25 ~ 120 ul
Ngwa ndị dị na ya 0.2mlSingle tube ， 8 * 0.2mlDrainage anwụrụ
ihe nnwale Mepee nchọpụta mmiri na-acha ọkụ nke isothermal
elu okpomọkụ Ọnọdụ ụlọ ～ 80 ℃
chịkwaa izi ezi 士 0.1 ℃
Ọnọdụ ịdị ọkụ ± 0.2 Celsius ℃
isi iyi Akwa ihie
onye nchoputa 200W CCD
Ọrụ njikwa njikwa mode 7 inch agba ihuenyo mmetụ
Nsonaazụ gosiri na Ngosipụta igwe na - egosipụta ezigbo oge, na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma, na-arụpụta mpụta
Interpretationzọ nke ntụgharị nsonaazụ Achọpụtara nchọpụta ọhụụ na-ahụ anya site na ìhè a na-ahụ anya (enwere ike ịkọwa nsonaazụ site na iji foto nke ngwa ahụ, yana anya nwere ike hụkwa nsonaazụ ya n'otu oge)
Nsonaazụ nchekwa Enwere ike ịjụ ya, chekwaa na mbupụ ya
ọrụ ngwanrọ Enwere ike ịtọ ntọala maka mmemme mmeghachi omume, dị ka oge mmeghachi omume, ọnọdụ mmeghachi omume, wdg; enwere ike ịmegharị oghere dị iche iche; enwere ike ịchekwa ma nwalee nsonaazụ ule; enwere ike ịtọ ọnụ ụzọ; nọrọ na njikere akpaka okpomọkụ akara na ekpo oke ọkụ nchedo ọrụ dị.
Nke gara aga: Ezigbo ndị na-ere ahịa Ce - SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nchọpụta Ngwọta Niile - jianma
nchọpụta nucleic acid
Pcr gọzie gị swab
Copyright - 2010-2020: All Rights echekwabara. Ngwa Ngwa Mgbapụta Acid Acid, Ngwa ule China na-agba ọsọ, Osisi Parvovirus (Cp), Mwepu-Free Kit,